Fakana an-keriny zazalahy Tsy azon’ireo mpanao ratsy ilay vola 10 tapitrisa Ar
Tena zava-nisy marina raha araka ny fanazavan’ny dadan’i Cedric tamin’ny gazety Jejoo omaly ilay fakana an-keriny nihatra tamin’ity zanany vao folo taona monja ny marainan’ny alatsinainy 2 martsa teo.
Araka ny fanazavany, efa teo akaikin’ny sekoly nianarany teny Soavimbahoaka i Cedric no nisy naka an-keriny. Tsy nahatsiaro tena intsony izy taorian’izay ary tsy nahita akory izay lalana nitondran’ireo mpanao ratsy azy… Avy hatrany dia nanaparitaka ny vaovao tao anaty tambajotran-tserasera ireo ray aman-dreniny taorian’ny nahafantarana fa tsy hita ilay menaky ny ainy. Tokony ho tamin’ny 9 ora alina anefa tamin’io alatsinainy io ihany dia nisy nandefa hafatra an-telefaonina ny rainy fa any amin’izy ireo i Cedric kely ary mila vola 10 tapitrisa Ar izy ireo mba hamotsorany ity farany. Ny alarobia 3 martsa teo tamin’ny 9 ora maraina no fotoana nomen’ireo mpanao ratsy ny ray aman-drenin’i Cedric . Isaorana an’Andriamanitra anefa, hoy ny rainy fa olona tsara sitrapo no nampandre anay tamin’io alarobia maraina io fa navotsotr’ireo mpaka an-keriny ary eny Anosy ilay zaza. Tsy lasan’ireo mpanao ratsy ilay vola 10 tapitrisa Ar. Nisy olona niantso hafa indray izahay avy eo nitaky valin-kasasarana izay heverin’izy ireo ho olon-kafa mihitsy. Tsiahivina moa fa voatery nentina tany amin’ny psychiatre mihitsy i Cedric ary efa milamina ny fahasalamany amin’ny ankapobeny. Mbola ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka kosa ny mpitandro ny filaminana ankehitriny ka misy ireo tsiambaratelo tsy maintsy tazonina.